Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY : Mifangaro ny akoho sy ny vorona
INTY SY NDAY : Mifangaro ny akoho sy ny vorona
Nanao ny fianianany amin’ny fandraisany ny asany ny tale jeneraly vaovao misahana ny Sampan-draharaha miady amin’ny famotsiam-bola na fanadiovam-bola (Samifin), Rajaonarison Mamitiana, ny alarobia teo. Tonga nanome voninahitra ny fotoam-pitsarana nandraisana an’io fiainianana io teny amin’ny lapan’ny Fitsarana teny Anosy ny filohampirenena Andry Rajoelina. Nambaran’ny filohampirenena fa “asa voalohany miandry an’io tale jeneraly io ny fanaraha-maso ny fampodiana ny vola vahiny eto”.
Raha faritana kely dia ireo vola vahiny izay sanda nivarotana an’ireo entana naondrana avy eto Madagasikara no tian-kambara amin’io fampodiana ny vola vahiny io. Raha ampifandraisina amin’ny asan’ny Samifin ange izany dia ahiana hifangaro amin’ny vola maloto ireny vola vidin’entana avy eto ireny e!
Mety ho azo eritreretina ihany izany satria mety hilaza ve ny mpanadio vola avy amin’ny rongony na avy amin’ny varotra fitaovam-piadiana any ivelany any, ohatra, fa vola sandan’ny nanondranana letschis na lavanila na kafe avy any Madagasikara ireto ka ampodiana any?
Etsy an-kilany, ary vola maloto sa vola madio ny vola sandan’ny nivarotana ny harem-pirenena Malagasy naondrana an-tsokosoko teto, toy ny volamena sy vatosoa sarobidy, ary manana fahefana hitaky ny fampodiana ireny vola vahiny sandan’ny harena niondrana an-tsokosoko teto ireny ve ny fanjakana Malagasy, na ministeran’ny vola izy na Samifin?
Ny sandan’ireo entana naondrana ara-dalàna teto ireo ka takiana ny fampiodiana azy aza ange ka malaina hamerina izany eto ny mpandraharaha nanondrana an’izy ireny e! Sa manana fahefana hampanao fanadihadiana any ampita any ny Samifin avy eto Madagasikara hoe “tena vidin’ny kafe na jirofo na lavanila avy any Madagasikara tokoa ve ireo vola vahiny hampodiana ireo sa sanatria vidin-drongony na vidin’ny fitaovam-piadiana?”
Tokony avela ho andraikitry ny ministeran’ny vola ny fitakiana ny fampodiana ireny vola vahiny sandan’ny entana niondrana teto ireny aloha e! Ny Samifin kosa dia tokony hifantoka amin’ny vola ampiasain’ny karana maro eto sy vahiny hafa ary Malagasy vitsivitsy izay fantatra fa vola maloto diovina e!
Misy tranom-barotra mpivarotra fiarakodia vaovao an’ny karana, ohatra eto, toy ny Océan Trade, izay sahy manda tsy hivarotra ny fiarany amin’ny karana hafa, fa aleony amidy mora amin’ny karana mpividy hafa, satria iny no porofo manamarina an’ilay fanadiovam-bola. Manao izany ny ankamaroan’ireo karana eto ireo, aoka hazava ny resaka. Ka nahoana no tsy ireny no ataon’ny Samifin laharam-pahamehana fa ny fampodiana ny vola vahiny izay efa sahanin’ny ministeran’ny vola? Sa tsy itokisana koa ny ministeran’ny vola?
Ireo karana miisa 5 avy eto Madagasikara izay fantatra fa mpanefoefo eo amin’ny sehatra iraisampirenena dia aza hadinoina fa vola maloto ka diovina ny ampahany betsaka amin’ny volan’izy ireny, ary eto Madagasaikara no sehatra iray anadiovan’izy ireny vola. Dia azontsika hoeritreretina hahafehy an’izany ve ny Samifin? Sarotra inoana fa aoka ny fitondram-panjakana mihitsy no handray andraiakitra. Ho vitan’ny fitondrana koa ve? Mahakely finoana aloha. Ary ny vahoaka? Azo eritreretina hahomby raha misy rafitra andaminana sy andrindrana ny asa eo anivon’ny vahoaka.